Fomba hafa hanaovana barbecue vegetarian | Bezzia
Pau Heidemeyer | 03/05/2021 16:00 | sakafo, fahasalamana
Manomboka ny toetrandro tsara dia mitady izay faran'ny herinandro isika mba hanaovana barbecue sy hankafizana hena tsara. Fa kosa, ho an'izay manaraka sakafo tsy mihinan-kena, toa tsy mankafy be toa an'ireo mihinana hena izy ireo.
Tsy marina tanteraka izany, satria ny barbecue dia afaka mandray ny fitakian'ireo mpihinan-kena, ary hahafinaritra azy ihany koa. Raha te hahalala izay safidy tsara indrindra ianao, Hilaza aminao izahay avy eo.
Ny maha-vegetarian dia manana fomba fiainana hafa, ary toy izany koa izy ireo afaka mankafy barbecue amin'ny fomba mifanaraka amin'ny safidiny sakafo izy ireo.
Ny safidy azo afindra eo anelanelany dia ny totozy legioma mahazatra, burger vegan miaraka amin'ny holatra, burger legume na legioma voatono miaraka amin'ny saosy legioma. Ny barbecue vegetarian dia ho salama hatrany raha mbola ao an-tsainao ny zavatra anarahanao azysatria ny tsaramaso dia mety ho "ratsy" tahaka ireo ampiasaina amin'ny hena.
Raha te hahalala safidy bebe kokoa ianao a barbecue legiomaHilaza aminao eto ambany izahay mba hahafahanao manana safidy bebe kokoa ao an-tsaina, angamba tsy mbola tafiditra tao anatin'izy ireo ianao.
1 Solony tsara indrindra ho an'ny barbecue vegetarian
1.1 Sipa legioma
1.2 Seitan fonosana
1.3 Legioma nofonosina
1.5 Katsaka voatono
1.6 Salady mafana
1.7 Akanjo yaourt
2 Aza atao ambanin-javatra ny legioma amin'ny barbecue
Solony tsara indrindra ho an'ny barbecue vegetarian
Betsaka ny azo atao amin'ny fikarakarana barbecue vegetarian. Ho fanampin'izay, hahita safidy lafatra ianao izay hahafahanao mankafy ny gastronomie amin'ny lafiny hafa.
Ny koba ihany koa dia azo atao legioma fotsiny, ireo koa dia velomina miaraka amin'ny fofona sy fofona navelan'ireo vainafo. Ho fanampin'izay dia mitondra loko be dia be hatrany amin'ny grill foana. Ny fampiasana ireo legioma ireo dia mahazatra: tongolo, dipoavatra maitso sy mena, voatabia, aubergine na zucchini.
Ny holatra koa dia mety ho tonga lafatra amin'ny famonoana. Tsy maintsy esorinao amin'ny sombin-kazo ireo mba hampidirina azy ireo amin'ny hazo tapa-kazo na vy lava, mba hahafahanao manangona ny lefom-bolo araka ny itiavanao azy. Rehefa mahandro izy ireo dia azonao atao ny manampy anana manitra sy menaka manitra mba hanatsarana azy.
Raha te-hanampy proteinina be dia be amin'ireto satroka ireto ianao dia afaka manao izany asio tofu henjana ny cubes. Ity vokatra ity, izay avy amin'ny soja, dia nampitombo ny fatran'ny proteinina ho an'ny olona maro izay manapa-kevitra ny hihinana zavamaniry na vegan.
Toy ny tofu, afaka manamboatra fonosana seitan ianao, sakafo iray izay vokatry ny gluten vita amin'ny varimbazaha azo tamin'ny fametahana ny lafarinina sy ny fanasana azy avy eo mba hamoahana ilay masidrany. Ho fanampin'izay, manome proteinina intelo heny noho ny hena izy, farafahakeliny 75%.
Mba hanaovana ny fonosana seitan dia azonao atao ny manaraka an'ity recette kely ity.
Lafarinin-kesika ampahany 1.
2-3 ampahany amin'ny lafarinina varimbazaha.
Sombin-mofo na katsaka katsaka 1.
Afangaro amin'ny rano, ron-kena, ary saosy.
Ireo fonosana ireo dia azo asiana zava-manitra, amboarinao ary ento any amin'ny makarakara. Noho izany ny seitananao dia ho be ranony, lasitike ary miaraka amina tononkira matsiro tena mahafinaritra.
Azo ampirisihina ianao hanomana legioma fenoina ho an'ny barbecue vegetarian anao. Azonao atao ny mampiasa zucchini na voatabia, ohatra. Azonao atao ny mameno epinara na crème chard azy ireo, ary azonao atao ny manampy tofu mba hampitomboana ny fihinanana proteinina ao aminy.
Ny atody sy holatra Izy ireo koa dia azo nofenoina ary tonga lafatra amin'ny barbecue. Raha lacto-vegetarian ianao dia afaka mampiasa fromazy hahamando azy kokoa.
Matetika ny burger dia vadin'ny barbecue ary amin'ity tranga ity dia mety ho toy izany koa izy ireo. Ny burger vegetarian dia vita amin'ny serealy sy legume. Izy ireo dia atambatra amin'ny legioma, na epinara na karaoty ohatra. Izany dia manome azy ireo endrika sy tsiro mahafinaritra.
Ny chickpeas na ny lentil dia azo ampiasaina ho legume, ankoatr'izay, afaka miomana toy ny falafel namboarina izy ireo. Azo ampiarahina ny legume sakamalao, tongolo gasy, persily, dipoavatra ary sira.
Raha tsy mpankafy legioma ianao dia azonao atao ihany koa ny manamboatra hamburger mifototra amin'ny vary, voanjo na voan-kazo. Ampiasao ny serealy rehetra tianao, manaova fikarohana ary mifalia ao an-dakozia.
Na dia tsy raisina aza izany, ny katsaka masaka amin'ny kobika dia mety tsara raha manendy barbecue. Ny katsaka dia manana kalitaon'ny sakafo mahavelona, ​​ary iray amin'ireo fomba tsara indrindra handraisana azy io amin'ny barbecue.
Miaraka amin'ny barbecue vegetarian tsara foana ny katsaka. Azonao kosehina amin'ny menaka ny koba iray manontolo alohan'ny hamonosanao azy amin'ny alim-pito alimo. Apetaho eo ambony grill dia ahodino mandritra ny 15 minitra vao vita tsara ny lafin-javatra rehetra.
Azonao atao ny manamboatra salady amin'ny sisiny izay ivon'ny fiheverana rehetra, miaraka amin'ny voatabia, salady, maharitra, kôkômbra, ary anana rehetra ilainao.
Ny salady romaine dia mety indrindra hanaovana salady tsara, madio sy vaovao ny fo. Ary koa, raha miaraka amin'ny salady amin'ny akanjo tsara ianao dia hanana ny salady tonga lafatra. Asio menaka tsara, vinaingitra balsama, sira, dipoavatra ary zava-manitra sasany.
EZava-dehibe ny fandrefesanao ny ora fahandro amin'ity salady mafana ity, satria tsy afaka maharitra eo amin'ny makarakara, ohatra, ny kôkômbra dia mety ho iray minitra, fa ny roa minitra maharitra, raha mandany fotoana ianao, dia hampihena be ny legioma ny hafanana.
Ary farany, afaka miloka saosy yaorta an-trano ianao izay mamela anao hanome ny legioma anao hikasika manokana ary tsy dia manjombona loatra izy ireo. Ny yaourt dia mamela safidy maro, azo afangaro amin'ny tongolo lay sy kôkômbra izy io mba hanaovana ny tzaiziki mahazatra, azonao atao koa ny miaraka amin'ny yaourt amin'ny saosy mba hanome azy fomba hafa.
Azonao atao ihany koa ny mampifangaro yaourt, miaraka amin'ny voatabia voatabia, tongolo ary coriander, mba hahazoanao voamadinika voatabia fomba Indiana. Safidy lavorary izy ireo mba hahafahanao miaraka amin'ireo legioma sy hamburger izay nomaninao teo aloha.
Aza atao ambanin-javatra ny legioma amin'ny barbecue
Araka ny efa hitanao, dia misy fomba hafa azo soloina amin'ny barbecue vegetarian, satria isika rehetra dia mieritreritra ny hena fa tsy ny nofo ihany. Fa ny legioma, ny hamburger, ny skewer na ny salady dia mety tsara toy ny hena iray ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » Fomba hafa hanaovana barbecue vegetarian